आँचल शर्मा बिहेपछि झनै बो’ल्ड बन्दै – १० तस्बिरमा हेर्नुहोस ! - Nawalpur Dainik
आँचल शर्मा बिहेपछि झनै बो’ल्ड बन्दै – १० तस्बिरमा हेर्नुहोस !
काठमान्डौ : आँचल शर्मा नेपाल’की निकै चर्चित नायिका हुन् । उनले छोटो समयमा नै निकै लो’भलाग्दो सफलता हासिल गरेकी छिन् । चलचित्र नाई नभन्नु ल ४ बाट नेपाली च’लचित्र क्षेत्रमा आएकी आँचलले छोटो समयमा नै धेरै चल’चित्रमा काम ग’रिसकेकी छिन् ।
Posted in पत्रपत्रिकाबाट, फोटो फिचर, मनोरन्जन, विचार/ब्लग, विजनेश, हेडलाइन
Prevचर्चामा साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहको पहिरन (हेर्नुहोस तस्बिर)
Nextचैत ०८ गते आइतबार, यस्तो छ तपाईको राशिफल